Qoraagii Sheekada Maana-faay oo ku geeriyooday London | KEYDMEDIA ONLINE
Qoraagii Sheekada Maana-faay oo ku geeriyooday London
Afyaqaan-kii Soomaaliyeed iyo sheeko-qorihii caanka ahaa, ee Dr Maxamad Daahir Afrax ayaa xalay ku geeriyooday dalka Ingiriiska.
LONDON, UK - Allah ha u naxariistee, waxaa magaalada London ee cariga Ingiriiska ku geeriyooday Maxamed Daahir Afrax, oo ahaa qoraa Soomaaliyeed, kaas oo maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha UK.
AUN, Afrax, wuxuu ahaa qoraa aad caan uga ah, bulshada Soomaalidda dhexdeeda, wuxuu ahaa, aasihii ururka Qalinleyda Soomaalyeed, Guddoomiyiha Akadeemiyad goboleedka Afka iyo Guddiga dib u eegista Dastuurka.
Waxaa aad loogu tixgaliyaa sheekada caanka ah, ee Maan-Faay, taas oo ku soo bixi jirtay joornaalkii Xiddigta October, ka hor inta uusan buug dhameystiran u baddalin.
Wuxuu wax ku qori jiray afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriiska. Afrax wuxuu daabacay saddex sheeko-wadaag oo Af-Soomaali ah, kuwaas oo kala ah, Guur-ku-sheeg (1975), Maana-faay (1979) iyo Galti-macruuf (1980).
Sidoo kale, wuxuu qoray buug-taariikheedka Af-Carabi ku qoran, ee Nida Al-Xoriyah (1976). Waxa kale oo uu daabacay dhawr sheeko oo gaagaaban oo af -carabi iyo af -Soomaali labadaba ah.
AUN, Maxamed Daahir Afrax, wuxuu hadda ka midka ahaa dadka fara ku tiriska ah ee aad ugu geyfan, ilaalinta afka Soomaaliya.
Agaasimaha Warbaahinta Keydmedia Online Cali Saciid Xassan iyo Shaqaalaheeda ku kala sugan dunida daafaheeda waxay tacsi tiiraanya leh hawada u marinayaan guud ahaan Ehaladii uu ka geeriyooday Marxuum Dr Maxamad Daahir Afrax.